08/02/2018 - Page 3 sur 4 -
Ady amin’ny homamiadana : Hankalazaina anio ny andro manerantany
08/02/2018 admintriatra 0
Homamiadana, antony fahatelo mahafaty ny olona aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana ary aretina faharoa mamono ny olona any amin’ny tany mandroso ihany koa. Hamono olona an-jaton’ny tapitrisa manerantany koa ny aretina homamiadana raha tsy misy ny …Tohiny
Ivo-toerana Mamitasoa : Hanamaivanana ny faharefoana ara-pivelomana
Niampy an’i Mamitasoa ireo ivo-toerana mandray an-tanana ireo sahirana ara-pivelomana eto an-drenivohitra. Ankoatra ireo efa misy, mampiavaka ity ivo-toerana iray ity ny fiaraha-miasany amin’ny ivo-toerana Ilaiko ao anatin’ny tetikasa Mendrika. Tanjon’ny ivo-toerana Mamitasoa, amin’ny alalan’ny …Tohiny
Ndahimananjara Johanita : « Tombony ho antsika ny fiarovana ny tontolo iainana »
Isan’ireo firenena mahazo tombontsoa amin’ilay antsoina hoe “crédit carbone” isika, noho ny fahavitrihantsika miaro ny tontolo iainana. Migoka ny vokatr’izany ireo mponina eny ifotony ary hahavitany manangana fotodrafitrasa mifandraika amin’ny filàny izany. “ Vokatr’io crédit …Tohiny
tsy mbola nikatona ny fery, izay no tsapa sy tazana tamin’ ny sora-baventy nolanjain’ ny fikambanan’ireo niaram-boina (AV7) nandritra ny hetsika fahatsiarovana sy fanateram-boninkazo ho an ‘ireo lavo tamin’ ny hetsika 7 febroary 2009 tetsy …Tohiny
Amin’ izao fahataperan’ny fotoam-piasan’ny masoivoho amerikanina Robert Yamate izao, dia nisy ny tombana fohy izay notanterahiny, indrindra mikasika ny raharaham-pirenena malagasy. Anisan’ny nitondra teny ohatra ny mikasika ny tokony hisian’ny filaminana eto amin’ ny tany ...Tohiny